carbonate - Synonyms of carbonate | Antonyms of carbonate | Definition of carbonate | Example of carbonate | Word Synonyms API | Word Similarity API
Top 10 similar words or synonyms for carbonate
Top 30 analogous words or synonyms for carbonate
ဆေးဝါးဗေဒ 38. Antacids လေနာရောဂါ ဆေးများ၊ အစာအိမ် အက်စစ်ဓါတ်ပျယ်ဆေးများ၊ (Aluminum carbonate, Aluminum hydroxide, Calcium carbonate, Calcium phosphate, Magnesium aluminosilicate, Magnesium carbonate, Magnesium glycinate, Magnesium hydroxide, Magnesium oxide, Magnesium trisilicate, Sodium bicarbonate)
ဆေးဝါးဗေဒ 311. Magnesium Carbonate လေနာရောဂါအတွက်ဆေး 1,250 - 1,500 mg
ပြည်တွင်းသောင်းကျန်းမှုသမိုင်း၊ အပိုင်း-၃ သန့်စင်ရသည်။ သန့်စင်ပြီးဖျော်ရည်ကို တတိယအဆင့် တွင် ဆိုဒီယမ်ကာဗွန်နိတ် (Sodium Carbonate) ကိုထည့်၍ မွှေလိုက်ပါက ဟီးရိုးအင်းများအနည်ထိုင်
ဆေးဝါးဗေဒ 299. Lithium carbonate, Valproic acid ကြောက်စိတ် bipolar disorders အတွက်ဆေး၊
ဆေးဝါးဗေဒ 242. Gemcal (Alkem) = Calcetriol + Calcium Carbonate + Zinc ကယ်လ်စီယံနည်းခြင်း၊ အရိုးပြော့ ရောဂါ၊ အမျိုးသမီးများတွင်ဖြစ်တတ်သည့် အရိုးအားနည်းရောဂါ၊
လီသီယမ် အဓိက လီသီယမ် ဒြပ်ပေါင်းမှာ lithium hydroxide ဖြစ်ပါသည်။ ၎င်းသည် အဖြူရောင် ပေါင်ဒါမှုန့်အသွင်ရှိပြီး monohydrate lithium hydroxide ကိုထုတ်လုပ်ပေးပါသည်။ carbonate အား မြေအိုး (ကြွေအိုး အစရှိသောအိုးများ) ထုတ်လုပ်မှုတွင် အသုံးပြုနိူင်ပြီး ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ ကုသရေးလုပ်ငန်းများတွင်လည်း အသုံးပြုပါသည်။ romine နှင့် lithium chloride တို့အာ ပြင်းအားကောင်းသော ဆားရည် (ပင်လည်ရေ) မှရရှိပြီး ၊(၎င်း ဆားရည်သည် ရှည်လျှားသော အပူချိန် ထောက်ပံ့မှုအောက်တွင် စိုးထိုင်းခြင်းကို စုပ်ယူနိုင်သော ဂုဏ်သတ္တိ ရှိပါသည်။ အဓိကစက်မှုလုပ်ငန်းများတွင် အသုံးပြုသော လီသီယမ်မှာ အရည်ခွံထူ တိရိစ္ဆာန် များမှရရှိသော အမဲဆီ (ချောဆီ) ပဲဖြစ်ပါတယ်။ အခြားအရေးပါသော လီသီယမ် ဒြပ်ပေါင်းများအား ဘထ္တရီအိုး များ၏ alkaline များ သိုလှောင်မှု သက်တမ်းကျယ်ပြန့်စေရန်အတွက်လည်း ထပ်ပေါင်း အသုံးပြုပါသည်။ လီသီယမ်သတ္တုစပ်များအား အလူမီနီယမ်၊ ကတ်ထ်မီယမ်၊ ကြေးနီ နှင့်
ဘေရီယမ် အစားအသောက်နှင့် ရေထဲတွင် ဘေရီယမ် ပါဝင်မှုပမာဏသည် ကျန်းမာရေးအတွက် စိုးရိမ်နိုင်စရာ မရှိသေးပေ။ လူသားများသည် ဘေရီယမ် စက်ရုံများတွင် ကြီးမားသော ဘေးအန္တရာယ်များနှင့်အတူ ဘေရီယမ်ကို ထိတွေ့လုပ်ဆောင် နေကြရသည်။ ကျန်းမာရေးအတွက် ဘေးအန္တရာယ် အများဆုံးဖြစ်စေနိုင်သော အချက်မှာ အသက်ရှူခြင်းဖြင့် ဘေရီယမ် ဆာလဖိတ်(Barium sulphate) နှင့် ဘေရီယမ်ကာဗွန်နိုတ်(Barium carbonate) များ ဝင်ရောက်နိုင်ခြင်းဖြစ်သည်။ အန္တရာယ်ရှိသော စွန့်ပစ်ပစ္စည်း စုပုံသော နေရာများတွင် အချို့သော ဘေရီယမ်များ ပါဝင်နေသည်။ ထိုဝန်းကျင်တွင် နေထိုင်သော လူများသည် ၎င်းတို့နှင့် ထိတွေ့နိုင်သောကြောင့် အန္တရာယ် ရှိသော အဆင့်တွင် ရောက်ရှိနေပေသည်။ ဘေရီယမ် ပါဝင်သည့် ညစ်ညမ်းသော ပတ်ဝန်းကျင်ရှိ ဖုန်များရှူမိခြင်း၊ မြေလွှာ နှင့် အပင်များ စားသုံးခြင်း၊ သို့မဟုတ် ရေသောက်ခြင်းဖြင့် ဘေရီယမ် နှင့် ထိတွေ့နိုင်သည်။ အရေပြားမှ တစ်ဆင့်လည်း ထိတွေ့နိုင်သည်။ ဘေရီယမ်၏ ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ အကျိုးသက်ရောက်မှုသည် ၎င်းဒြပ်ပေါင်းများ၏ ရေထဲတွင် ပျော်ဝင်နိုင်မှုအပေါ် မူတည်နေသည်။ ၎င်းဒြပ်ပေါင်းများ ရေထဲတွင်ပျော်ဝင်နေခြင်းသည် လူသားများ အတွက် ဘေးအန္တရာယ် ဖြစ်စေနိုင်သည်။ အလွန်ကြီးမားသော ဘေရီယမ်ပမာဏသည် ရေထဲတွင် ပါဝင် နေခြင်းကြောင့် သွပ်ချာပါဒရောဂါများ ဖြစ်စေနိုင်ပြီး၊ သေဆုံးနိုင်သည်အထိ အန္တရာယ်ကြီးမားပါသည်။
ဓာတုဗေဒ ရေပြင်း၊ ငရဲမီး (Acid) ၊ ပုံးရည်ပြင်း၊ သုံးခါပြန် ပုံးရည်၊ ထန်းရည်ပုံးရည် (Acetic Acid) ၊ အသစ်ညှစ် သံပုရာရည် (Citirc Acid) ၊ အိန္ဒနံပုံးရည် (Lead monoxide) ၊ အာဂေါ်ရေဆီ၊ ရေဘုရင် (တော်ဝင် အက်ဆစ်၊ Aqua regia) ၊ ကက္ကူကမည်း (Benzonic Acid) ၊ ပြဒါး၊ ဟင်္သပဒါး၊ အမာလာဂမာ (Amalgam) ၊ ရွှေဆိုင်း၊ စိန်ဖြူ (Arsenic) ၊ ဆေးဒါန်း၊ ကန့်၊ ခဲမ၊ ခဲမပုတ်၊ ခဲပြာ၊ ခဲမပြာ၊ ခဲမနက် (Graphite) ၊ ဝှော်ဆဝရော၊ လောင်မီး (Phosphorus) ၊ ခဲမဖြူ (ဘင်၊ သလွဲဖြူ၊ Pewter) ၊ ခနောက်စိမ်း (Antimony) ၊ ဘော် (Silver) ၊ ရွက်နီဘော်၊ ဂျွတ် (Bismuth) ၊ မီးသွေး၊ ကျပ်ခိုး၊ သံ၊ သံမှုန့်၊ သံတစဉ်းစာ၊ သံပြာ၊ သံမဏိပြာ၊ သံဂုံဂမံ (Ferric oxide) ၊ ကြေးနီ၊ ကြေးဝါ၊ ဒုတ္ထာ၊ ဒုတ္ထာဆီ၊ ဒုတ္ထာရည် (Blue vitorial, Copper sulphate) ၊ ယမ်း၊ ယမ်းပြန်ပြီး၊ ယမ်းစိမ်း၊ တာတရု၊ တာတဂူ၊ တာတလူ (Nitre, Salpeter, Potassium nitrate) ၊ ဇဝက်သာ (Salammoniac, Ammonia chloride) ၊ လက်ချား (Borax, Sodium Pyroborate) ၊ သစ်ရွက်ပြာ၊ စဖိုပြာ (Potassium carbonate) ၊ မဖောက်ထုံး၊ မြေဖြူ၊ အာရုဒါ၊ အာရုဝါ (အရက်ဆား)၊ ကျောက်ချဉ်၊ ဆား (Sodium chloride) ၊ သဲ၊ အုတ်မှုန့်၊ အုတ်နီခဲ၊ မြေအိုးမှုန့်၊ အရက်နီ၊ ဘရံအရက် (Brandy) ၊ အာရကော် (Alcohol) ၊ သင်းတွဲစိမ်းမှုန့်၊ သန္ဓောဆား၊ တရေမင်တီနာဆီ၊ ရောဘာရဘူ (ထင်းရှူးဆီ)၊ အိန္ဒနံကျောက်၊ နှင်းရည်၊ ပရုပ်၊ ရေနံဆီ၊ ကတ္တရာဆီ၊ မြေဖယောင်း၊ နိပဆေး၊ သေနတ်ကျောက်၊ အင်ကြင်းကျောက်၊ သံလိုက်ကျောက်၊ ကျောက်သလင်း၊ ကျောက်စစ်။